पहिलो दिन नौ हजारले लगाए खोप
प्रकाशित : बिहिबार, माघ १५, २०७७०९:०७
देश । बुधवार देखि नेपालमा पनि खोप अभियान सुरु भएको छ । भारत सरकारले उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिशिल्डलाइ पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी , सरसफाइकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई लगाइएको हो । पहिलो दिन बुधबार सातै प्रदेशमा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, शव व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, सुरक्षाकर्मीलगायतले खोप लगाएका हुन् ।
देशभरका १ सय २० भन्दा बढी केन्द्रबाट पहिलो दिन ९ हजारभन्दा बढीले खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जनाएका छन् । उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबार बेलुकासम्म देशभर ९ हजार ७ सय ४२ जनाले खोप लगाएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेश १ मा पहिलो खोप कोसी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले लिए । बुधबार प्रदेशका ८ जिल्लाका १९ केन्द्रबाट खोप सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । अग्रपंक्तिमा खटिने ३५ हजार ५ सय ८३ जनालाई खोप लगाउने तयारी रहेको छ ।
वाग्मती प्रदेशमा हेटौंडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रवीण श्रेष्ठलाई खोप लगाएर अभियानको सुरुवात गरियो । प्रदेशका १३ जिल्लामा ६४ हजार १ सय ९२ जनालाई खोप लगाउने कार्यक्रम राखिएको छ । हेटौंडामा संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ७६ हजार डोज खोप प्राप्त भएको छ । प्राप्त खोप वाग्मती प्रदेशको मकवानपुर, चितवन र सिन्धुली तथा प्रदेश २ को बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लालाई पनि उपलब्ध गराइएको छ ।
पर्साको नारायणी अस्पतालमा आयोजित समारोहमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले खोप कार्यक्रमको उद्घाट्न गरे । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख कामेश्वर चौरसियाका अनुसार जिल्लामा ५ सय ५२ भाइल खोप प्राप्त भएको छ । प्रत्येक भाइलमा १० डोज हुन्छ ।
गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा बुधबार एकैसाथ खोप लगाइयो । पहिलो चरणमा ३९ हजार १ सय ३९ डोज खोप आएको थियो । पहिलो दिन १४ खोप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । माघ १८ सम्म हुने पहिलो चरणको अभियानमा बिहीबारदेखि भने खोप केन्द्र बढाइने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । पहिलो दिन प्रदेशभरका १ हजार ८ सय ५९ जनालाई खोप लगाइएको निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा बुधबार ६ सय ५८ जनाले खोप लगाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले बताए । यहाँ तराईका ६ जिल्लाका ८ वटा केन्द्रबाट अभियान सुरु भएको हो । कर्णाली प्रदेशमा ७५५ जनाले खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले पहिलो खोप लगाएका थिए । कर्णालीका १० जिल्लामा १२ केन्द्र सञ्चालन गरिएको थियो ।
निर्देशनालयका अनुसार सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा २ सय २५ र मेहेलकुना अस्पतालमा ८८ जनाले खोप लगाएका छन् । दैलेखमा २०, सल्यानमा ३०, रुकुम पश्चिममा ३०, चौरजहारी अस्पतालमा ३१, जाजरकोटमा ४०, कालिकोटमा ७९, जुम्लामा १ सय २३, डोल्पामा २०, हुम्लामा २९ र मुगुमा ४० जनाले खोप लगाए । खोप ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा केही जिल्लामा मात्र अभियानको सुरुवात भएको डा. खड्काले बताए । कर्णालीका १२ अस्पतालमा ११ हजार ७ सय ६० जनालाई पहिलो चरणमा लगाउन २६ हजार डोज खोप आएको छ ।
सुदूरपश्चिमका ९ मध्ये ८ जिल्लामा खोप अभियान सुरु भएको छ । बाजुराबाहेक अरू जिल्लामा खोप लगाउन थालिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. गुणराज अवस्थीले जानकारी दिए । प्रदेशको आपूर्ति केन्द्र धनगढीबाट पठाइएको खोप बुधबार बाजुरा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । बुधबार प्रदेशभर १ हजार ८२ जनाले खोप लगाएका छन् । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा १ सय ७०, अछाम जिल्ला अस्पतालमा २ सय ३६, बैतडीमा ७८, डडेलधुरामा १ सय २२, दार्चुलामा ५०, डोटीमा १ सय ५६ र कञ्चनपुरमा १ सय २४ जनालाई खोप लगाइएको हो ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–५ की महिला स्वयंसेविका तारादेवी शर्माले खोप लगाउन पाएकामा आत्मबल बढेको बताइन् । ‘कोरोनाकालमा गाउँबस्तीका घर जान डर लाग्थ्यो, खोप लगाएपछि त्यो डरबाट मुक्त भएकी छु,’ उनले भनिन् । स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा पहिलो चरणमा १६ हजारभन्दा बढीले खोप लगाउनेछन् ।
सर्लाहीमा थपिए ३८ संक्रमित
२ सय १३ जनामा संक्रमण
प्रदेश नम्बर २ मा थप ७६ कोरोना संक्रमित
कोरोना संक्रमितको संख्या १२ सय ४